२०७७ बैशाख १७ बुधबार, इरफान खान थिएटरबाट सिनेमाबाट आएका थिए। जयपुर राजस्थानमा सन् १९६६ मा जन्मिएका खानले अन्तिम फिल्म ‘अंग्रेजी मिडियम’मा अभिनय गरेका थिए। ... बाँकी अंश»
इरफानको मृत्युले बलिउडमा आँसुको बाढी, फ्यानले भने - 'अन्तिम स्वाससम्म सम्झनेछु'
२०७७ बैशाख १७ बुधबार, अमिताभ बच्चनले इरफानलाई श्रद्धांजलि दिंदै लेखेका थिए- "इरफान खानको निधनको समाचार आउँदैछ। यो सबै भन्दा चिन्तित र दु: खी समाचार हो। एक अविश्वसनीय प्रतिभा, एक महान सहयोगी, सिनेमाको दुनियामा एक शानदार योगदानकर्ताले हामीलाई छिट्टै छोड्नुभयो। उहँका लागि प्रार्थना र प्रार्थना।" ... बाँकी अंश»
२१ बर्ष जेठा विनोद खन्नासँग माधुरीको यस्तो सीन, आज पनि लाग्छ पछुतो
२०७७ बैशाख १५ सोमबार, उक्त समय माधुरीको उमेर २१ बर्षको थियो भने विनोद खन्ना ४२ बर्ष पुगेका थिए । बलिउड उद्योगमा संघर्ष गरिरहेकी माधुरीले सो समय फिल्मको लागि तयार थिइन् तर हीरोको उमेरे निकै धेरै रहेको बताउथिन् । यसैबिच फिल्मको सुटिङ शुरू भयो । ... बाँकी अंश»
कोरोना फैलाएको भन्दै मुद्दा लागेकी कनिकाले खोलिन् मुख
२०७७ बैशाख १५ सोमबार, कोरोना भाइरस संक्रमित भएपछि निकै आलोचना बलिउड गायिका कनिका कपुरले मुख खोलेकी छिन् । उनी हाल उपचारपछि निको भएर घरमै क्वारेन्टाइनमा बसिरहेकी छिन् । ... बाँकी अंश»
शाहरुखका यी चलचित्र जुन अहिलेसम्म गरिएन रिलिज
२०७७ बैशाख १२ शुक्रबार, काठमाडौं । बलिउडका किङ्ग ५४ बर्षका शाहरुख खानले अहिलेसम्म १ सय भन्दा ज्यादा चलचित्रमा अभिनय गरिसकेका छन् । चलचित्रमा शाहरुखलाई कहिले भिलेनको रोलमा देखिए त कहिले रोमान्टिक रुपमा देखिए । यति मात्र होइन 'स्वदेस' जस्तो चलचित्रमा उनको राष्ट्र भक्त अवतारमा देखिए । तर के तपाईलाई थाहा छ शाहरुखको करियरमा केहि यस्ता पनि चलचित्र छन् जुन अहिले सम्म थिएटरमा रिलीज भएन । ... बाँकी अंश»
लकडाउनमा दूरदर्शनको टीआरपी एक नम्वरमा : रामायण र महाभारतपछि 'श्रीकृष्ण' थपिदै
२०७७ बैशाख १२ शुक्रबार, 'श्रीकृष्ण' धारावाहिक पहिलो पटक सन् १९९३ मा प्रसारण भएको थियो । शो तीन बर्ष १९६६ सम्म चल्यो। धारावाहिकको निर्देशन रामानंद सागरले गरेका हुन्। ... बाँकी अंश»
यी किताब जसले कमाए चलचित्रभन्दा बढी पैसा
२०७७ बैशाख १० बुधबार, काठमाडौं । पछिल्लो समय डिजिटल प्रणालीको व्यापक विस्तार भएको छ । यद्यपि किताब पढ्ने मानिसहरुका लागि भने अनलाइनले खासै धेरै प्रभावित गर्न सकेको छैन । केही मानिसहरु यस्ता पनि छन्, जो अहिले पनि कागजी किताबहरु पढ्नैमा रुचि देखाउँछन् । जसको कारण अहिले पनि किताबको व्यापार पनि उल्लेख्य मात्रामा हुने गरेको छ । ... बाँकी अंश»
बलिउडका यी नायकलाई मन पराउँथिन् काजोल, केवल एक फिल्ममा गरिन् काम
२०७७ बैशाख ८ सोमबार, काठमाडौं । भारतीय अभिनेत्री काजोलले आफ्नो निजी जीन्दगीको केही खुलासा गरिन् । उनी कपिल शर्माको शोमा करणसँग पुगेकी थिइन् । सो क्रममा करण जौहारले काजोलको जीन्दगीको एक रोचक कुराको खुलासा गरेका थिए । काजोल एक भारतीय अभिनेतालाई मन पारउँथिन् । ... बाँकी अंश»
हिरो बन्नुअघि होटलमा वेटर थिए अक्षय, फालिए आमिरको चलचित्रमा
२०७७ बैशाख ७ आइतबार, काठमाडौं । अक्षयकुमारको फिल्म केसरी र गुडन्यूजले भारतीय बक्स अफिसमा राम्रो प्रदर्शन गर्‌यो । भारतीय बक्स अफिसमा उनी वर्षमा ४-५ फिल्ममा काम गर्ने एकमात्र अभिनेता हुन् । उनी आफ्नो परफेक्ट समयको व्यवस्थापनको माध्यमबाट यस्तो गर्न सफल भइरहेका छन् । ... बाँकी अंश»
विवाहको तीन वर्षपछि नीतालाई डक्टरले सुनाए यस्तो कुरा, अम्बानी परिवारमा छायो सन्नाटा
२०७७ बैशाख ७ आइतबार, काठमाडौं । मुकेश अम्बानी भारतमा सबैभन्दा चर्चित भारतीय अर्बपति हुन् । धनी मानिसको जीवनशैलीबारे धेरैलाई चासो हुन्छ । अम्बानीको परिवारको पनि छुट्टै किसिमको कहानी छ । ... बाँकी अंश»
यी अभिनेत्रीका कारण कमल हासनलाई श्रीमतीले दिएकी थिइन् डिभोर्स
२०७७ बैशाख ५ शुक्रबार, एजेन्सी । सन् २००४ मा कमल हासन र सिमरनको सामिप्यता ले आहत भएर श्रीमती सारिकाले डिभोर्स दिएकी थिइन् । कमल आफु भन्दा २२ बर्ष कान्छी सिमरनसँग प्रेममा रहेका थिए । ... बाँकी अंश»
रानी -ऐश्वर्या: शाहरुखको 'चलते-चलते' बाट मनमुटाव, अभिषेकसँग विवाहपछि मारामार
२०७७ बैशाख ५ शुक्रबार, एजेन्सी । बलिउड अभिनेत्री रानी मुखर्जी र ऐश्वर्या राय बच्चनबीच सन् २००३ मा शाहरुख खानको चलचित्र 'चलते-चलते' लाई लिएर मनमुटाव सुरु भएको थियो । सो चलचित्रमा ऐश्वर्यालाई रानीको कारण हटाइएको थियो । यहिबाट दुवै अभिनेत्रीबीच शीतयुद्ध सुरु भएको हो । ... बाँकी अंश»
आमिरको ‘लगान’ बाट स्टार बनेकी अभिनेत्रीको सन्यासी जीवन
२०७७ बैशाख ४ बिहिबार, काठमाडौं । आमिर खानको ‘लगान’बाट बलिउडमा डेब्यु गरेकी नायिका ग्रेसी सिंहलाई पहिलो फिल्ममा नै सफलता मिलेको थियो । तर, उनी सिने क्षेत्रबाट हराइन् । फिल्ममा आउनुभन्दा पहिला उनी टीभी सिरियलमा देखिने गर्थिन् । सन् १९९७ मा जीटीभीमा अमानत नाम गरेको सिरियलमा डिंकीको भूमिका निभाएकी थिइन् । केही सिरियलमा अभिनय गरेपछि उनलाई सोझै फिल्मको अफर आएको थियो । ... बाँकी अंश»
यसरी चम्कियो शाहरुखको भाग्य, हेमा मालिनीपछि यी अभिनेताको हात
२०७७ बैशाख ४ बिहिबार, काठमाडौं । शाहरुख खानलाई बलिउडको किंग भनिन्छ । उनको जीवनी हरेक मानिसलाई प्रेरणाको स्रोत बन्ने गर्दछ । जुन स्टारडमको मानिसहरु कल्पना पनि गर्न सक्दैनन् शाहरुख आज त्यो स्थानमा रहेका छन् । शाहरुखलाई शीर्ष स्थानमा पुर्‍याउन उनको मेहनतको अहम भूमिका रहेको छ । तर अर्को एक सत्य पनि छ शाहरुख आज यती ठुलो स्टार बन्नुमा केहि मानिसहरुको हात रहेको छ । शाहरुखको मेहनतसँगै उनले पाउने सपोर्ट र शुभचिन्तकको शुभकामनाले उनि यहा पुगेका हुन् । ... बाँकी अंश»
बलिउड स्टारका घरको मुल्य आकाश छुने, कुन स्टारको घरको मुल्य कति ?
२०७७ बैशाख ३ बुधबार, काठमाडौं । बलिउड स्टारको जीवनशैली बारे सबैको चासो हुन्छ । कलाकारको जस्तो लत्ताकपडा, गाडिघोडा, खानपिन, रहनसहन हरेक आम मानिसको चाहना हुन्छ । प्राय स्टार यसको शौखीन पनि हुन्छन् । उनिहरु आफ्नो जीवनशैली राजकीय बनाउन हर संभव कोशिश गर्ने गरेका छन् । ... बाँकी अंश»
सन्तोस पन्तको ‘हिजो आजका कुरा’ प्रदर्शन स्थगीत
२०७७ बैशाख १ सोमबार, काठमाडौं। ‘हिजो आजका कुरा’–दि मुभीको प्रदर्शन स्थगीत गरिएको छ । कोरोना भाइरसका कारण बिश्वनै लकडाउनको अबस्थामा रहेकाले ‘हिजो आजका कुरा’ निर्माण कम्पनी पन्त फिल्म प्रोडक्सनले नयाँ बर्षको अवसरमा सोमबार एक बिज्ञप्ती जारी गरि सो जानकारी दिएको हो । ... बाँकी अंश»
त्यसपछि शाहरुखले कसे टाप
२०७६ चैत २८ शुक्रबार, निर्देशकका रुपमा उनीहरुले अब्बास बर्मावाला र मस्ता बर्मावालालाई छनोट गरे । यी दाजु–भाइ अब्बास–मस्तानको नाममा संयुक्त रुपमा फिल्म निर्देशन गर्ने गर्थे । प्रहरीले सकिलको मोबाइलबाट हुने कल ट्यापिङ गरिरहेको रहेछ । ... बाँकी अंश»
कुन बलिउड कलाकारको बानी कस्तो ?
२०७६ चैत २८ शुक्रबार, काठमाडौं । भारतीय स्टार्सहरु आफ्नै विभिन्न कारणहरुले गर्दा चर्चामा रहने गरेका छन् । कहिलेकाँही उनीहरुको फिल्मको चर्चा हुने गर्छ भने कहिलेकाँही उनीहरुको व्यक्तिगत जीवनको विषयमा पनि चर्चा हुने गर्छ । ... बाँकी अंश»
लकडाउनमा नेपाली हनुमान चालिसा
२०७६ चैत २८ शुक्रबार, वसन्ततिलका छन्दमा तयार पारिएको भजनमा हनुमानको गुणगान गाइएको छ । भिडियोलाई ट्रेन्डिङ नेपालको युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक गरिएको हो । गीतकार भानुभक्तका अनुसार सम्भवत हनुमान चालिसालाई नेपाली भर्सनमा भजनमार्फत ल्याइएको यो पहिलो गीत हो । ... बाँकी अंश»
जब दाउद इब्राहिमका दाहिने हातलाई देखेर भागे शाहरुख
२०७६ चैत २८ शुक्रबार, काठमाडौं । सन् २००० तिरको कुरा हो । त्यतिबेलासम्म दाउद इब्राहिमको दाहिने हातका रुपमा छोटा सकिलले आफूलाई उभ्याइसकेका थिए । दाउदले उनलाई खासगरी जबर्जस्ती रकम असुलीको धन्दामा केन्द्रित गराएका थिए । ... बाँकी अंश»